नेपाल र अमेरीकाकाे खेलमा दर्शकले देखाएकाे त्याे ब्यवहार…, मैदानमा पानीको बोतल, ढुंगा प्रहार
सन् २०१०, फेब्रेवरी २६ तारिख, स्थान थियो कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान, प्रतियोगिता थियो, आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन पाँच । जहाँ लिग चरणमा नेपालले पाँचौ खेल अमेरीका विरुद्ध खेल्दै थियो । दर्शकले कीर्तिपुर मैदान भरिभराउ थियो । यसअघिका चार खेलमा नेपालले चारै खेल जितेको थियो । सो खेलमा नेपालले पहिले ब्याटिङ
४ वर्षको प्रेमपछि प्रतिभा घिमिरे र सोमपाल कामीको बिहे ……(फोटो फिचर)
क्रिकेटर सोमपाल कामीले चार वर्षअघि प्रतिभा घिमिरेलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिभाले जवाफ दिन झन्डै दुई साता लगाइन्। सन् २०१६ मार्च महिनाका ती दुई साता सोमपालको निम्ति दुई जुनी बराबर भयो। त्यसपछि प्रतिभाले जे जवाफ दिइन्, त्यसले यो जोडीलाई जुनी-जुनीको निम्ति एकअर्कासँग बाँधेको छ। २ साताको पर्खाइपछि जब प्रतिभाले प्रेम
यी खेलाडी मुत्यु हुने, ८ वर्ष पहिल्यै भएको थियो भविष्यवाणी !
विश्वका चर्चित र महान बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्टको २६ जनवरी २०२० मा एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । उनको निधनप्रति विश्वभरीबाट दुःख प्रकट गरिएको छ । यससँगै अहिले उनको मृत्युको भविष्यवाणीको विषय चर्चामा छ । ८ वर्ष पहिल्यै उनको मृत्युको भविष्यवाणी भएको थियो । भविष्यवाणीमा उनको मृत्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा हुने
किन फर्किए ट्राइसिरिज खेल्न बिग ब्याश छाेडेर सन्दीप नेपाल फर्कँदै : साेमबार आइपुग्ने
काठमाण्डाै – नेपालका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने साेमबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन् । अस्ट्रेलियामा जारी बिग ब्याश लिग खेलिरहेका सन्दीपले नेपालले ओमन र अमेरिकासँग खेल्ने ट्राइसिरिजका लागि नेपाल फर्कन लागेका हुन् । ओमन र अमेरिकासँग नेपालले माघ २२ गतेदेखि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ खेल्दैछ । त्यसका लागि
मेस्सीको फ्यानलाई खुसीको खबर : ‘मेस्सी बने विश्वकै बलिया खेलाडी’
बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी एन्टोइन ग्रिज्र्रम्यानले आफ्ना टिममेट तथा कप्तान लियोनल मेस्सी विश्वकै बलिया खेलाडी भएको दाबी गरेका छन् । हालै ‘डीएजेडएन’सँगको कुराकानीमा फ्रान्सेली स्टार ग्रिजम्यानले आफ्ना सहकर्मीको प्रशंसा गरेका हुन् । यसै सिजन एथ्लेटिको मड्रिडबाट बार्सिलोना गएका ग्रिजम्यान र कप्तान मेस्सीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भइनसकेको बताइन्छ । तर, यी दुई
खुशीको खबर : टी-२० विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपाल सिधै छानियो !
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) सन् २०२१ मा भारतमा हुने टी-२० विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। १६ टिमबीच हुने सन् २०२१ को टी-२० विश्वकपका लागि सन् २०२० को विश्वकपका शीर्ष १२ टिम सिधैं छनोट हुनेछन्। पुछारका ४ टिम विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा धकेलिनेछन्। जनावरी २०२० को टी-२० वरीयतामा अघि
अब्बल खेल तर इतिहास रच्‍न चुके सन्दीप लामिछानेले !
चर्चित नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले टी-२० क्रिकेटमा इतिहास रच्न चुकेका छन्। बुधबार उनले अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० र टी-२० फ्रेन्चाइज लिगमा शतक विकेटको इतिहास बनाउने अवसरबाट चुकेका हुन्। अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल) को बुधबारको खेलमा दुई विकेट लिएको भए सन्दीपले टी-२० क्रिकेटमा शतक विकेट पूरा गर्ने थिए। तर, बुधबारको
सप्तरीमा ८४ करोडको लागतमा मदन भण्डारी रंगशाला बन्ने निश्चित
सप्तरी – सप्तरीमा ८४ करोडको लागतमा रंगशाला बन्ने भएको छ । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा फुटवल ग्राउण्ड तथा एथलेटिक्स ट्रयाकसहितको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण हुने निश्चित भएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको विकासकालागी गाउँ गाउँमा खेल पुर्वाधार निर्माणलाई पुर्याउने निति अनुसार यहाँ मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण हुने भएको छ
यूएई – युएईमा जारी टी–२० शृङ्खला अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल ४ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्‍यो । झण्डै १८ सय जना नेपाली दर्शकले खचाखच भरिएको खेल मैदानको छेउमा नेपाली बाजागाजा घन्किएका थिए । लय छोडिसकेको खेललाई नेपाली ब्याट्सम्यान दिपेन्द्रसिंह ऐरी र पवन शर्राफले जितसम्म पुर्‍याए । नेपाली झण्डा फहराउँदै खेलाडीलाई हौसला प्रदान
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पहिलोपटक आज ‘जिपिएस ट्रयाकर’ प्रणाली प्रयोग गरेर अभ्यास शुरु गरेको छ । यही भदौ १९ गतेदेखि बङ्गलादेशमा हुने साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखेर ‘जिपिएस ट्रयाकर’ प्रयोग गरेर प्रशिक्षण गरिएको हो । अन्यत्र धेरै अगाडिबाट यसको प्रयोग गरिएपनि नेपाली फुटबलमा यो पहिलो पटक प्रयोग गरिएको हो ।